China 3D faiba glaasi kpara Fabric emepụta na suppliers | Beihai Faiba glaasi
2021 N'ogbe price Faiba glaasi anụ ahụ ute - faiba glaasi n'elu anụ ahụ ute - Beihai faiba glaasi
Mgbidi Mgbidi (Mgbapu Mgbochi)
3D FRP Panel na resin
3D N'ime Isi
Ọrụ Carbon Fiber Fabric
3-D spacer fabric mejupụtara uzo abuo na uzo uzo abuo, nke ejikọrọ ya na ikpo ahihia.
Na ọkpụkpọ S abụọ ndị a jikọtara ọnụ mepụta ogidi, nke nwere akụkụ 8 na ụzọ agha na 1 dị na weft.
3-D spacer fabric mejupụtara uzo abuo na uzo uzo abuo, nke ejikọrọ ya na ikpo ahihia. Na ọkpụkpọ S abụọ ndị a jikọtara ọnụ mepụta ogidi, nke nwere akụkụ 8 na ụzọ agha na 1 dị na weft.
3-D spacer fabric nwere ike iji iko fiber, carbon fiber ma ọ bụ eriri basalt. Ọzọkwa ha ngwakọ akwa nwere ike ịmepụta.
Ogologo nke ogidi elu: 3-50 mm, nso nke obosara: ≤3000 mm.
Atụmatụ nke nhazi akụkụ gụnyere njupụta nke areal, ịdị elu na nkesa nkesa nke ogidi na-agbanwe.
3-D spacer fabric composites nwere ike inye nnukwu nguzogide mgbapụ anụ na mmetụta na-eguzogide na mmetụta na-eguzogide, ịdị arọ dị mfe. akwa isi, magburu onwe ya kwes mkpuchi, now damping, na na.
3D faiba glaasi kpara Fabric nkọwa
Area arọ (g / m2)
Isi ọkpụrụkpụ (mm)
Njupụta nke hie (nsọtụ / cm)
Njupụta nke Weft (njedebe / cm)
Ike ọdụdọ ike (n / 50mm)
Ike ọdụdọ (n / 50mm)
Ajụjụ nke faiba glaasi 3D fụchara akwa
1) Kedụ ka m ga - esi gbakwunye akwa na ihe ndị ọzọ na akwa Beihai3D?
Nwere ike itinye ihe ndị ọzọ (CSM, ịgagharị, ụfụfụ wdg) mmiri na mmiri na akwa Beihai 3D. Ruo iko 3 mm nwere ike ịpịgharị na mmiri Beihai 3D tupu njedebe nke oge agwụla na ike mmiri zuru ezu ga-emerịrị. Mgbe gel-oge n'ígwé nke elu ọkpụrụkpụ nwere ike laminated.
2) Etu esi etinye laminates achọ (eg HPL Prints) na akwa Beihai 3D?
Enwere ike iji laminates achọ mma na ebu-n'akụkụ ya wee laminated akwa ahụ n'elu laminate ahụ ma ọ bụ laminates mara mma nwere ike ịtụgharị n'elu akwa Beihai 3D.
3) Kedu otu esi eme akụkụ ma ọ bụ usoro na Beihai 3D?
Otu uru Beihai 3D bụ na enwere ike ịkpụzi ya ma dikwa ya n'ụzọ zuru oke. Nanị kpoo akwa ahụ na akụkụ achọrọ ma ọ bụ usoro na ebu ma tụgharịa nke ọma.
4) Kedụ ka m ga-esi acha lamiate Beihai 3D?
Site na agba agba resin (ịgbakwunye pigmenti na ya)
5) Kedụ ka m ga-esi nweta elu dị larịị n’elu laminates 3D dị ka elu dị larịị na ntanetị gị?
The ezigbo elu nke samples achọ a ezigbo waked ebu, ntụgharị iko ma ọ bụ melamine. Iji nweta ihu dị larịị n'akụkụ abụọ, ị nwere ike itinye ihe ọkpụkpọ nke abụọ (mwekota mpempe akwụkwọ) n'elu mmiri Beihai 3D, were n'uche ọkpụrụkpụ nke akwa ahụ.
6) Kedụ ka m ga-esi mata na a kpochapụrụ akwa Beihai 3D kpamkpam?
Nwere ike ịkọ site na ọkwa nke nghọta ma ọ bụrụ na Beihai 3D agbaala mmiri nke ọma. Zere ebe ndị a na - ekpuchi mmiri (inclusions) site na ịpịgharị resin ahụ n'isi - na site na akwa ahụ. Nke a ga - ahapụ ọnụọgụ ziri ezi nke fọdụrụ na akwa ahụ.
7) Kedụ ka m ga - esi gbochie ibipụta na gelcoat nke Beihai 3D?
• Maka ọtụtụ ngwa, mkpuchi ma ọ bụ akwa CSM dị mfe zuru oke.
• Maka ngwa ndị a na-ahụ anya dị egwu, ịnwere ike iji uwe mgbochi na-ebipụta mbipụta.
• zọ ọzọ bụ ịhapụ anụ ahụ dị na mpụga tupu ị gbakwunye Beihai 3D.
8) Kedụ ka m ga - esi hụ na translucency nke Beihai 3D laminate?
The translucency bụ n'ihi na agba nke resin, kpọtụrụ gị resin soplaya.
9) Gini bu ihe kpatara nbili (opupu ahihia) nke akwa Beihai 3D?
A na-eji aghụghọ eji akwa akwa beihai 3D emebe agwa ndị dị ka iko. Iko nwere ike 'ehulata' mana enweghị ike 'ịmegharị'. Cheedị banyere isi iyi ndị ahụ niile na-eme ka ndị na-ebugharị iche iche, resin na-akpali ọrụ a (nke a na-akpọkwa ikike).
10) Beihai 3D akwa adịghị agwọ nke ọma, gịnị ka m kwesịrị ịme?
Ihe ngwọta abụọ
1) Mgbe ị na-arụ ọrụ resins nwere styrene, nkedo nke styrene na-agbanwe agbanwe na Beihai 3D impregnated nwere ike ibute mgbochi ọgwụgwọ. Lowdị resin dị ala (er) nke dị ala (LSE) ma ọ bụ nke ọzọ bụ mgbakwunye mgbakwunye nke mkpụrụ osisi na-ewepụta mkpụrụ osisi (dịka Byk S-740 maka polyester na Byk S-750) na resin ka a tụrụ aro.
2) Iji kwụọ ụgwọ nke resin dị ala ma jiri ya belata mgbake ọgwụgwọ na eriri igwe kwụ ọtọ, a na-atụ aro ịgwọ ọrịa dị ukwuu. Enwere ike imezu nke a site na iji mgbatị dị elu na ọkwa dị elu (ọkacha mma catalyst) na-akwụ ụgwọ site na onye na-egbochi ya iji dozie oge gel.
11) Kedụ ka m ga - esi gbochie mmebi na ogo Beihai 3D (ahịhịa na ahịhịa dị na oche)?
Nchekwa dị mkpa maka mmesi obi ike dị mma: na-edepụta mpịakọta ndị ahụ na mbara ala na gburugburu ala na-adịghị mma na-emeghe akwa ahụ nke ọma ma ghara ịmelata akwa ahụ.
• Mkpokọta: ị nwere ike wepu folds site na ị na-adọkpụ ihe na-adọkpụ ala site na ogige ahụ mgbe ị na-agbagharị n'akụkụ ya
• Ihe ndọlị: iji nwayọ na-agagharị na nwayọ ga-eme ka ọ pụọ n'anya
Nke gara aga: 3D FRP Panel na resin
Osote: Kpara Roving ngwakọta ute
3d kpara akwa
3d kpara Glass Fiber Fabric